Waa maxay macnaha Dox Qof? Hagaha Buuxa ee Sida loo Dox Qof
Bogga ugu weyn Waa maxay macnaha Dox Qof? Hagaha Buuxa ee Sida loo Dox Qof
Dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan ka taxaddarno waxa aan ku niraahno khadka. Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in adduunka online-ku uu ku siinayo xorriyadda aad ku tiraahdo - ama ku qor - wax kasta oo aad rabto. Sidaas maaha. Doxing-ku waxay kaa qaadi kartaa xorriyaddaas, iyo cawaaqib xumo weyn.
Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in abuurista aqoonsiyo been abuur ah ay ku siineyso awoodda aad ku cabiri karto ra'yi kasta, si kasta oo uu muran u jiro, iyada oo aan cidina dib kuugu soo celin karin.
Laakiin weerarrada doxing waa dhab. Wayna adagtahay inaad si buuxda u qariso aqoonsigaga internetka. Difaaca ugu fiican ee ka hortagga doxing waa in aad ka taxadirto waxa aad internetka ku dhejiso oo waligaa la wadaagin macluumaadka gaarka ah golayaasha, boorarka fariimaha, ama baraha bulshada.
Waa maxay Doxing?
Maxay ka dhigan tahay in qof la dox?
Goorma ayuu Doxing bilaabay
Ma Sharci Darro Ma tahay in Qof Dox ah?
Ku hanjabaya DOX ma sharci darro?
Maxaa dhacaya markaad hesho Doxxed?
Doxing-ku sharci-darro ma ku tahay Maraykanka?
Sida loo Dox qof
Sidee buu u shaqeeyaa Doxing?
Sideen isaga ilaalin karaa in aan is-dabo-jiro?
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo.
Doxing, oo loo soo gaabiyo "Dropping Dox", waa weerar online ah kaas oo tuugadu ay qodaan macluumaadka shakhsi ahaaneed iyo dukumentiyada - sidaas darteed qaybta "Dox" ee "Dropping Dox" - si loo muujiyo aqoonsiga dhabta ah ee dadka rajeynaya inay qarsoodi noqdaan si ay u joogaan.
Waxaa loola jeedaa in la raadiyo iyo daabac macluumaadka gaarka ah ama aqoonsiga ku saabsan (qof gaar ah) internetka, sida caadiga ah ulajeedo xaasidnimo leh.
Hadafka inta badan waa in la ceebeeyo ama la dhibaateeyo dhibbanaha. Tusaale ahaan, haakarisku waxay muujin karaan aqoonsiga boodhka fariinta aan la garanayn si ay u ceebeeyaan qofkaas. Waxaa laga yaabaa inaad rajaynayso in qofka uu waayi doono shaqadiisa ama ay ka fogaadaan asxaabta ama asxaabta.
"Hackers iyo feejignaanta internetka waxay si joogta ah u khiyaameeyaan shakhsiyaadka guud iyo kuwa gaarka ah labadaba. waxa kale oo loo qoraa sida doxxing.
Doxing qofku waa nooc ka mid ah cagajuglaynta interneed kaaso ah isticmaalka macluumaadka xasaasiga ah ama sirta ah, bayaannada, ama diiwaanka dhibaataynta, kashifaadda, waxyeelada maaliyadeed, ama ka faa'iidaysiga kale ee qof loogu talagalay.
Tani waxay ku lug leedahay qaadashada xog gaar ah oo qof ku saabsan ka dibna lagu faafiyo intarneedka ama siyaabo kale oo lagu gaarsiinayo dadweynaha.
Dhaqankani wuxuu ahaa mid aad u kulul sanado badan, sababtoo ah dukumiintiyadu waxay ka kooban yihiin diiwaanno joogto ah oo ku saabsan dadka iyo waxyaalihii ay sameeyeen oo ay sheegeen, taas oo noqon karta hub xooggan oo iyaga ka dhan ah.
Si kastaba ha ahaatee, ereyga "doxing" ayaa markii ugu horeysay caan noqday 1990-meeyadii markii tuugadu bilaabeen inay daadiyaan dukumiintiyada dadka ku dhuumanayay magacyo been abuur ah. Sidan, tuugadu waxay soo bandhigi karaan weeraryahano kale oo ay la tartamayeen.
Magacaabistooda oo meesha laga saaray waxa ay keentay in ay la kulmaan maamulka iyo kuwa kale oo isku dayaya in ay raadiyaan.
Doxing waxaa loo isticmaali karaa si taban, si togan waxay noqon kartaa hab lagu daba galo dambiilayaasha ama tuugada hubaysan iyadoo la adeegsanayo xogta iyo xaqiiqooyinka iyaga ku saabsan, marka sidaas la sameeyo si uun ayaa hubka looga dhigaa.
Si taban ayaa laga yaabaa in dambiiluhu uu cabsidan u isticmaalo si uu awood ugu yeesho dhibbanaha si uu baad uga qaato ama ugu qasbo dhibbanaha.
Waxay noqon kartaa sharci-darro laakiin Xaalado badan, doxing-ku maaha sharci-darro, gaar ahaan sababta oo ah macluumaadka la kashifo ayaa si guud looga heli karaa khadka.
Tani waxay ka dhigan tahay, in mar uun, bartilmaameedku uu siiyay hay'ad xaq u leh inay daabacdo. Si kastaba ha ahaatee, habka loo isticmaalo xogta ayaa laga yaabaa inay ka dhigto falka guud mid sharci darro ah, gaar ahaan haddii ay ku lug leedahay daba-galka, hanjabaada, ama dhibaataynta bartilmaameedka.
Marka ugu horeysa, hanjabaadaha ma ahan kuwo la aqbali karo bulshada dhexdeeda iyadoo laguu arkayo inaad halis gelineyso nafta qofka, sidaa darteed ku goodinta inaad siidaayaan macluumaadka muhiimka ah ee qofka waa sharci darro.
Qofku marka uu dhogortamo wax badan ayaa dhacda, marka hore qofku wuu niyad jabay, wuu xishooday, oo si dhib leh ayuu u wajihi karaa dadweynaha, sababtoo ah xogtiisa gaarka ah ayaa la soo bandhigaa.
Jawaabtu inta badan waa maya: doxing waxay u egtahay inaysan sharci darro ahayn haddii macluumaadka la kashifay uu ku dhex jiro qaybta dadweynaha, waxaana lagu helay habab sharci ah. Si kastaba ha ahaatee, gudaha Maraykanka, doxing shaqaale dawladeed wuxuu hoos yimaadaa sharciyada federaalka ee shirqoolka waxaana loo arkaa dembi federaali ah.
Waxa ugu horreeya ee aan tilmaamayo waa Truecaller. Truecaller waa codsi iPhone/iPod ah oo ku heli kara ciwaannada dadka oo keliya lambar taleefan! Dad aad u yar ayaa arrintan wax ka og, waana yaab.
Haddii aad hesho nambarka taleefanka qof, waxaad ku qori kartaa Truecaller aaladdaada iPhone/iPod taabashada, waxayna ku siin doontaa magaalada ay ku nool yihiin, iyo xitaa ciwaanka.
Ma dammaanad qaadayso ciwaanka, laakiin waxay had iyo jeer ku siin doontaa magaaladooda! Habka kale ee cajiibka ah ee dadka cinwaanadooda looga heli karo lambarada taleefanadooda waa shabakad. Waa ISSearch.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad gelisaa lambarkooda taleefanka, halkaasna aad tagto! Waxay ku siinaysaa cinwaan, macluumaadka hantida, da'dooda, deriskooda, iyo macluumaadka deegaanka! Dhammaan oo wata lambar taleefan!
FamilySearch waa shabakad aad ku heli karto dhalasho, guur, dhimasho, tijaabo, dhul, militari, diiwaanada IGI, iyo in ka badan! Mareegtan waxa kale oo ay ku ogolanaysaa in aad hesho SSN (lambarka bulshada) ee qofka dhintay.
Goobtani waa mid cajiib ah oo aan la garanayn. Waxaad ka heli kartaa cinwaano, iyo macluumaad aad u badan oo ka mid ah.
Sidoo kale, haddii aad rabto inaad qof ka nixiso, waxaad heli kartaa xubin qoyska ka mid ah oo dhintay, waxaad ka heli kartaa lambarkooda badbaadada bulshada goobta, oo ku dar dox-gaaga.
Dadka badankiisu ma yaqaaniin inaad heli karto SSN-ka dadka dhintay waxayna ka baqi doonaan oo aad u ogaan doonaan sidaad u samaysay. Marka labaad, injineernimada bulshadu waxay noqon kartaa arrin weyn oo ku jirta dox. Waxa kale oo si fudud loo samayn karaa.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee aad u isticmaali karto injineernimada bulshada, waa isticmaalka lambarka taleefanka been abuurka ah. Aynu nidhaahno waxaad heshay lambarka taleefanka bartilmaameedkaagu, ama kan hooyadiis/aabaha.
Waxaad wici kartaa bartilmaameedkaaga lambarka taleefanka hooyadaa ama aabbaha, waxayna u malayn doonaan inaad tahay wiilkooda! Waxay la macno tahay inaad u baahan tahay inaad ogaato waxa bartilmaameedkaagu u eg yahay oo aad ka fikirto sheeko ama xeelad si aad wax uga hesho isaga ama iyada. CallerIDFaker waa app-ka ujeedadan.
Waxaad la yaabi doontaa sida ay u fududahay in la qodo macluumaadka adiga kugu saabsan. Waxaa laga yaabaa inay sahlanaato haddii aad waqti badan ku bixiso ku dhejinta fariimaha iyo golayaasha.
Doxing waxay ku salaysan tahay xaqiiqda ah in ku dhawaad ​​qof kastaa uu haysto xog ku saabsan iyaga oo sabbaynaya intarneedka, oo lagu ilaaliyo heerar kala duwan oo ammaan ah - iyo xaaladaha qaarkood, midnaba.
Marka xogtan la helo, waa la hubeeyaa oo loo adeegsadaa bartilmaameedka.
Dabagalka Magacyada Isticmaalayaasha
Dadku inta badan waxay isticmaalaan magacyo isku mid ah ama kuwa la mid ah akoonnada kala duwan ee mareegaha iyo codsiyada shabakadaha kala duwan.
Aad bay ugu fududahay dambiilayaasha internetka, dhaqdhaqaaqayaasha, ama kuwa kale inay isticmaalaan magacyada isticmaale ee aad leedahay si aad u qeexdo xogta aad adigu leedahay
Ku socodsiinta raadinta WHOIS ee Magaca Domain
Haddii aad leedahay magac domain, waxaad haysaa macluumaad kugu saabsan oo lagu kaydiyay gudaha diiwaanka.
Haddii aad midkood ku dhacdo khiyaanada phishing-ka ama qof soo dhex geli karo iimaylkaaga, waxay ama ka qaadan karaan tafaasiisha xasaasiga ah ee adiga kugu saabsan ama waxay maraan akoonkaaga oo ay u isticmaalaan iimayladaada weerar doxing ah. Iyadoo la adeegsanayo khiyaanada phishing, waxaa lagugu soo jeedinayaa inaad gujiso.
Baraha bulshada ee hadal haynta
Haddii aad ka dhigto akoonnadaada warbaahinta bulshada mid ay heli karaan dadweynaha, macluumaad kasta oo aad naftaada ku dhejiso ama aad ku hayso profile-kaaga qof kastaa wuu arki karaa.
Kala shaandhaynta Diiwaanka Dawladda
Mareegaha dawladda sida Waaxda Gaadiidka (DMV) iyo kuwa haysta diiwaannada degmada, shatiyada ganacsiga, shatiga guurka, iyo macluumaadka diiwaangelinta cod-bixiyayaasha dhamaantood waxay leeyihiin xog loo isticmaali karo weerar doxing.
Dabagalka Ciwaanka IP-ga
Doxers waxay ogaan karaan cinwaankaaga Internet Protocol (IP) ka dibna waxay isticmaali karaan xaqiiqda ah inay ku xiran tahay meesha aad jir ahaan ku jirto si aad u sameyso weerar.
Tusaale ahaan, waxay la xiriiri karaan adeeg bixiyahaaga internetka (ISP) oo ay iska dhigi karaan adiga, iyaga oo waydiinaya su'aalo iyaga siinaya macluumaad dheeraad ah oo adiga kugu saabsan.
Dib-u-eegidda Taleefanka Gacanta
Isla marka uu jabsado nambarkaaga gacanta, way qodi karaan si ay u helaan macluumaad dheeraad ah oo adiga kugu saabsan.
Marka ay qof wax ku shubayaan, weerarradu waxay isticmaali karaan dhuuqin baakidh si ay uga faa'iidaystaan. Xogta waxaa lagu habeeyaa baakado marka ay dhex mareyso intarneedka. Marka baakidh la ursado, weeraryahanku waxa uu sheegi karaa nooca macluumaadka ku jira.
Sida magacaba ka muuqata, dullaaliinta xogtu waxay ururiyaan macluumaadka ka dibna u iibiyaan kuwa kale si ay faa'iido u helaan. Dallaaliyaha xogta ayaa ururin doona macluumaadka ku saabsan bartilmaameedyada suurtagalka ah isagoo tagaya dhowr shabakadood oo kaydiya diiwaannada dadweynaha.
Tan waxa ku jiri kara shabakadaha kaararka daacadnimada, kuwaas oo la socda caadooyinkaaga onlaynka ah ama taariikhda raadintaada, si ay u helaan xogta ay uga baahan yihiin adiga.
Xaaladaha qaarkood, dallaaliyaha xogta ayaa ka iibsan doona xogta dullaal kale ka dibna ka iibin doona iibsada shabakada mugdiga ah.
Iyadoo aysan jirin si loo dammaanad qaado in aan weligaa lagugu damin karin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xeelado aad raaci karto si aad u yareyso fursadaha.
Muhiimadu waa inaad ka taxadarto waxa aad ku dhejiso baraha bulshada iyo boorarka fariimaha. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka ay tahay inaad raacdo:
Wax badan ha wadaagin: Wax badan ha wadaagin warbaahinta bulshada ama golayaasha onlineka ah iyo boorarka fariimaha. Wadaagista macluumaadka shakhsiyeed waxay si fudud u siin kartaa Doxern wax badan oo uu kula shaqeeyo.
Beddel habaynkaaga gaar ahaaneed: ka dhig qoraaladaada baraha bulshada mid gaar ah si dadka la doortay kaliya ay u arki karaan.
Ha Bixin Xogta Gaarka ah: Markaad iska diiwaan gelinayso baraha bulshada, ha bixin wax macluumaad shakhsi ah sida taariikhda dhalashada, magaalada aad ku dhalatay, dugsiga sare, ama macluumaadka loo shaqeeyaha.
Isticmaal VPN: Saxeexa a shabakad khaas ah oo wata, ama VPN, waxay kaa caawinaysaa ilaalinta macluumaadkaaga gaarka ah doxers. Markaad ku xidho intarneedka adoo saxeexaya VPN marka hore, ciwaankaaga dhabta ah ee IP waa qarsoon yahay.
Tani waxay ka dhigan tahay in jabsadayaashu aysan u go'aamin karin cinwaankan goobtaada ama macluumaad kale oo lagu aqoonsan karo.
Isticmaal magacyo kala duwan oo baraha bulshada ah: Haddii aad booqato baraha bulshada ee kala duwan, ha isticmaalin isticmaale isku mid ah mid kasta.
Ha isticmaalin isla magaca isticmaale ee Facebook ee aad ku isticmaasho Twitter, Instagram, iyo Pinterest. Waa maxay sababtu? Way u fududahay dadka inay la socdaan taariikhda soo galitaankaaga baraha bulshada marka waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan ay tahay inay raacaan isticmaaleha internetka.
Ka digtoonow iimaylada phishingka: Doxers waxay isticmaali karaan khiyaanada phishing-ka si ay kuugu khiyaaneeyaan inaad ka tanaasusho ciwaanka gurigaaga, lambarkaaga bulshada, ama xataa ereyada sirta ah.
Ka digtoonow haddii aad hesho fariin sheeganaysa inaad ka timid bangi ama shirkad kaadhka deynta ah oo ku weydiinaysa macluumaadkaaga shakhsiyeed. Hay'adaha maaliyadeed waligood kama codsan doonaan macluumaadkan iimaylka.
Kelmado adag ayaa fure u ah: Ka fogee snoops-ka macluumaadkaaga khaaska ah adiga oo isticmaalaya furaha sirta ah ee adag boggaga sida akoonkaaga bangiga internetka, meelaha kaadhka deynta, iyo dashboardka shaqada.
Furaha sirta ah ee adag ayaa sidoo kale ka ilaalin kara basaasiinta inay galaan shabakadahaaga bulshada, beddelaan macluumaadkaaga shakhsiyeed ee shabakadahan, helaan macluumaadka akoonkaaga, ama ku dhejiyaan farriimaha iyaga u gaar ah iyagoo wata magacaaga.
Erayada sirta ah ee ugu fiican waxay ka kooban yihiin xarfo yaryar iyo xarfo waaweyn, nambaro iyo calaamado isku jira.
Macluumaadka qaarkood waa inaan waligood la wadaagin: Ballanqaado inaadan waligaa daabicin macluumaadka qaarkood onlayn, sida lambarkaaga soshal sekuuriti, ciwaanka guriga, lambarka shatiga darawalnimada, iyo macluumaadka ku saabsan akoonnada bangiga ama lambarrada kaararka deynta.
Xasuusnoow, jabsadayaashu waxay faragelin karaan fariimaha iimaylka, markaa ha ku darin wax macluumaad ah oo khaas ah kaaga.
Isticmaal wax ka badan hal ciwaan email: Waxaad hagaajin kartaa sirtaada adiga oo u abuuraya akoonno iimaylo gaar ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee waraaqaha.
Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa akoon aad u isticmaasho kaliya inaad iska diiwaangeliso adeegyada qulqulka, goobaha muusiga, golayaasha, guddiyada fariimaha, iyo adeegyada kale.
Waxaad markaa isticmaali kartaa ciwaanka labaad ee iimaylka oo aad ku isticmaasho noloshaada xirfadeed. Isticmaal ciwaanka iimaylkan si aad ula xidhiidho asxaabta warshadaha, ula xidhiidh asxaabtaada, una dir warbixinada kormeerayaashaada.
Isticmaal ciwaanka email saddexaad ee xidhiidhka gaarka ah ee asxaabtaada iyo xubnaha qoyskaaga: Ha siin ciwaanka iimaylkan qof aan ka tirsanayn qoyskaaga ama asxaabtaada.
Hagaag, bixinta qiyaasta wakhtiga ay dadkani ku bixiyeen raadinta macluumaadka, way u qalantaa iyaga.
Doxingku ma dambiile?
Haddii qof u isticmaalo hab sharci darro ah si uu u qabsado macluumaadka ama haddii ay u isticmaalaan macluumaadka si ay ugu hanjabaan dhibbanaha markaa haa waa fal dambiyeed.
Kiisaska waaweyn qaarkood, dhibbanuhu waxa laga yaabaa inuu ku doodo in xogta la sii daayey aanay run ahayn tanina waxay ku lug yeelan kartaa dacwad cay ah taasoo keeni karta xabsi.
Doxing sidoo kale ma loo arki karaa sidii doxxing?
Haa, waa hab kale oo loo higgaadiyo kelmadda feerka sida midabka loo higgaadinayo midabka.
Waa maxay sababta doxing-ku cabsi badan u yahay?
Doxing waa cabsi sababtoo ah waxay ku lug leedahay soo bandhigida macluumaadka suurtagalka ah ee xasaasiga ah ee dadweynaha si ay u dhaawacdo sumcadda dhibbanaha.
Hindise Sharciyeedka Hanti -dhowrka ee Nigeria ma khiyaamo baa? Helitaanka Xaqiiqda
Bixinta vs letgo: Ogow Appkayga Iibinta ugu fiican 2022
Dib -u -eegista Buugga Maareeyaha Daqiiqad | 2021
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu noqdo mid wax soo saar leh, laakiin mararka qaarkood carqaladaha iyo caadooyinka xun ayaa ka faa'iidi kara iyaga. Si kastaba ha ahaatee, a…
Dib -u -eegista Naadiga Baabuurka ee Ameerika 2022: Sideen ku Bixiyaa Lacagta | Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Haddii aad waligaa la kulantay waxaad dareemayso inaad ku xayiran tahay wadada dhinaceeda,…
Immisa Ayaa La Siiyaa Kursiga Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Ku Saabsan Ku-noqoshada
Immisa ayaa la bixiyaa mushaharka beddelka? Ma garanaysaa? Dad badan ma sameeyaan, taasina waa sababta ay habboon tahay…
Tomorro waa shabakad sheegata in si toos ah loogu diro ogaysiis deeq-bixineed taleefannada. Tomorro, oo ah shirkad sheegta…
Bakhtiyaa -nasiibka bilaashka ah: Ku guuleysta ilaa £ 1,000/ Maalin | Hadda Soo Xulo Koodhka Boostada
Ku guuleysiga lacagta bilaashka ah weligood may fududayn! Si fudud u dheji koodka boostada oo hubi maalin kasta haddii uu guulaystay…